သခင်ယေရှုသည် တစ်ပါးတည်းသောသခင်နှင့် ဘုရင်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာပါသည်။ - ယေရှုခရစ်တော်၏ဗျာဒိတ်တော်
သခင်ယေရှုသည် တစ်ပါးတည်းသောသခင်နှင့် ဘုရင်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာပါသည်။
ေမ ၂၀၊​ ၂၀၂၂ မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ကောင်းကင်ပွင့်သည်ကို ငါမြင်၍ မြင်းဖြူတစ်ကောင်ကို မြင်၏။ သူ့အပေါ်၌ ထိုင်သောသူကို သစ္စာနှင့် သစ္စာဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို ခံရ၍၊ ဖြောင့်မတ်စွာ စစ်ကြောစီရင်တတ်၏။ မျက်စိတော်သည် မီးလျှံကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ ခေါင်းတော်၌ သရဖူများစွာပါရှိသည်။ သူကိုယ်တိုင်မှလွဲ၍ မည်သူမျှ မသိနိုင်သော အမည်ကို ရေးထားသည်။” ~ ဗျာဒိတ် ၁၉:၁၁-၁၂
ဤကျမ်းဂန်များတွင်၊ နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်ကို- တစ်ဆူတည်းသောစစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၊ နှင့် စကြဝဠာသခင်နှင့်ဘုရင်- ယေရှုခရစ်။
ဤသည်မှာ တန်ခိုးကြီးခြင်းတည်း။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ပထမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါ တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ခဲ့သော ဝိညာဉ်ရေးအောင်နိုင်သူ. ထိုအချိန်က ဧဝံဂေလိတရားနေ့အစတွင် သရဖူတစ်ခုသာ ဝတ်ဆင်ထားသည်မှလွဲ၍ ကယ်တင်ခြင်းခံရသူအားလုံးရဲ့ ဝိညာဉ်ရေးဘုရင်ဖြစ်နေပါပြီ။
“သိုးသငယ်သည် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအရာကိုဖွင့်သောအခါ ငါမြင်သောအခါ၊ မိုးခြိမ်းသံကဲ့သို့၊ သားရဲလေးကောင်မှတပါး၊ လာ၍ကြည့်လော့ဟု ဆိုသည်ကို ငါကြား၏။ မြင်းဖြူတကောင်ကို ငါမြင်၏။ သရဖူကိုလည်း ပေးတော်မူသဖြင့် အောင်နိုင်၍ အောင်နိုင်လေ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၆:၁-၂
သို့သော် ဝိညာဉ်ရေးအရ အောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော အခြားသူများလည်း ရှိသေးသည်။ ဤသည်မှာ သူကယ်တင်သူများ၏ နှလုံးသားမှ စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အနိုင်ယူရန် ရှာဖွေနေသည့် ဝိညာဉ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်သည်။ သူတို့၏ နှလုံးသားများကို အနိုင်ယူပြီးသည်နှင့်၊ သူသည် နောက်ထပ် သရဖူများစွာဖြင့် သရဖူဆောင်းမည်ဖြစ်သည်။
“လူအပေါင်းတို့သည် အာဒံ၌သေသကဲ့သို့၊ ခရစ်တော်အားဖြင့် လူအပေါင်းတို့သည် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်သည် အဦးသီးသောအသီး၊ ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူသောအခါ၊ ခမည်းတော်တည်းဟူသော နိုင်ငံတော်ကို ဘုရားသခင်ထံတော်၌ အပ်တော်မူသောအခါ အဆုံးသို့ရောက်လိမ့်မည်။ အုပ်စိုးရှင်အပေါင်းတို့၊ အခွင့်အာဏာရှိသမျှတို့ကို ပယ်ရှင်းသောအခါ၊ ရန်သူအပေါင်းတို့ကို ခြေအောက်၌ မချမှီတိုင်အောင် စိုးစံရမည်။ ဖျက်ဆီးခံရမည့် နောက်ဆုံးရန်သူမှာ သေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကား၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သူ၏ခြေအောက်၌ ချထားတော်မူပြီ။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သူ့အောက်၌ချထားသည်ဟု မိန့်တော်မူသောအခါ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သူ့အောက်၌ ချထားသောသူမှတပါး အခြားသောသူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား၏။ ခပ်သိမ်းသော အရာတို့ကို နှိမ့်ချသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့ကို ခံရမည်အကြောင်း၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သူ့အောက်၌ ချထားတော်မူသော သားတော်သည်လည်း၊ ~ ၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၂-၂၈
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၉ တွင် သူသည် အနိုင်ယူပြီးသွားပြီဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ် ၁၉:၁၂ တွင် သရဖူအားလုံးသည် ယေရှုခရစ်အပေါ်တွင် ရှိနေသည်။ ဤသရဖူများသည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာနှင့် တန်ခိုးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယနေ့ လူသားတို့၏ ပြိုလဲသွားသော ဘာသာတရားများနှင့် လူသားတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာ လုံးဝမရှိကြတော့ပေ။ ၎င်းတို့အားလုံးကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ပြိုလဲပြီး အကျင့်ပျက်ခြစားကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏အစတွင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၂ တွင် နဂါးသည် ဦးခေါင်းပေါ်တွင် သရဖူများ ဆောင်းထားသည်။Paganism သည် လူများစွာအတွက် ဝိညာဉ်ရေးဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။ သို့သော် Paganism ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၃ ၏ ရိုမန်ကက်သလစ်သားရဲအတွင်း၌ ပုန်းအောင်းနေခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ် ၁၃ ပါ သားရဲသည် သူ၏ဦးခေါင်း၌ သရဖူမရှိ၊ ချိုများပေါ်တွင်သာ ရှိသည်။အလယ်ခေတ်ကာလတွင် မြေကြီးပေါ်ရှိ ဘုရင်များသည် တန်ခိုးအာဏာရှိခဲ့ကြောင်း ပြသသည်။ ထို့ကြောင့် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသည် ထိုကွဲပြားခြားနားသောဘုရင်များကို သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် အာဏာကို ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဧဝံဂေလိနေ့တွင်၊ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်၊ လူသားတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်များအတွက် တိုက်ပွဲတစ်ခုနှင့် ဘုရင်များ၏ စစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးဘုရင်ဖြစ်သည့် ယေရှုခရစ်ကို ဖော်ထုတ်ရန် တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Paganism၊ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျနှင့် ကျဆုံးသွားသော ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းများသည် ၎င်းတို့၏သရဖူအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြပြီး ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကို တိုက်ခိုက်ရာတွင်ပင် ၎င်းတို့အတွက် ကိုယ်ထိလက်ရောက် သတ်ဖြတ်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျမ်းဂန်၌ ကျွန်ုပ်တို့အား ညွှန်ကြားထားပါသည်။
“ဘုရားသခင့်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့၏အမှု၌ အဘယ်သူသည် အပ်နှံရမည်နည်း။ တရားမျှတသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ အပြစ်တင်သောသူကား မည်သူနည်း။ အသေခံတော်မူသော ခရစ်တော်ကား၊ တဖန်ထမြောက်တော်မူသော၊ ငါတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်ဘက်၌ပင် ရှိတော်မူ၏။ ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ငါတို့ကို အဘယ်သူ ခွဲထုတ်မည်နည်း။ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း၊ အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ကိုယ်တော်အတွက်ကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့သည် တနေ့လုံး အသေသတ်ခြင်းကို ခံရပါ၏။ သတ်ခြင်းအတွက် ငါတို့သည် သိုးကဲ့သို့ မှတ်ကြပြီ။ မဟုတ်ပါဘဲ၊ ဤအရာများအားလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူသောသူအားဖြင့် အောင်နိုင်သူများထက် သာ၍များပါသည်။ အကြောင်းမူကား၊ သေခြင်း၊ အသက်၊ ကောင်းကင်တမန်များ၊ အထွဋ်အမြတ်များ၊ တန်ခိုးများ၊ ပစ္စုပ္ပန်အရာများ၊ နောင်လာမည့်အရာများ၊ အမြင့်၊ အနက်၊ အခြားသတ္တဝါတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မေတ္တာနှင့် မခွဲနိုင်စေရဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌ရှိတော်မူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။” ~ ရောမ ၈:၃၃-၃၉
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၇ ၏ နောက်ဆုံးသားရဲ၊ ဝိညာဉ်ရေးအရ လုံးလုံးလျားလျား ရှုံးနိမ့်သူသည် မည်သည့်သရဖူမျှ မရရှိပါ။. ဤအရာက သားရဲအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဤလောက၏ဘုရင်များသည် ဖြောင့်မတ်သောဝိညာဉ်ရေးအာဏာ လုံးဝမရှိတော့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာအားလုံးသည် ယေရှုခရစ်အပေါ်တွင်သာ ဘုရင်များ၏ဘုရင်နှင့် သခင်တို့၏သခင်အဖြစ်သာ တည်ရှိသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော သားသမီးများသည် သူတို့၏ဘဝတွင် တန်ခိုးနှင့် အခွင့်အာဏာအားလုံးကို ဘုရားသခင်ထံ အပြည့်အဝ အပ်နှင်းထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
“နိစ္စထာဝရ အသက်ရှင်တော်မူသော ပလ္လင်တော်ပေါ်၌ ထိုင်တော်မူသောသူကို ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသောအခါ၊ အသက်ကြီးနှစ်ကျိပ်လေးပါးတို့သည် ပလ္လင်တော်ပေါ်၌ ထိုင်တော်မူသောသူ၏ ရှေ့တော်၌ ပြပ်ဝပ်၍ နိစ္စထာဝရ အသက်ရှင်တော်မူသောသူကို ရှိခိုးကြကုန်၏။ ပလ္လင်တော်ရှေ့တော်၌ မိမိတို့သရဖူများကို ချကာ၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းအသရေနှင့် တန်ခိုးကို ခံထိုက်ပေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်း၍၊ နှစ်သက်တော်မူသဖြင့်၊ ~ ဗျာဒိတ် ၄:၉-၁၁
ခေတ်အဆက်ဆက် ခရစ်ယာန်စစ်များအားလုံး၏ အခွင့်အာဏာကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဤသရဖူများကို ဘုရားသခင်ထံ အပ်နှင်းထားသည်။ ဧဝံဂေလိတရားနေ့ပြီးနောက် အာရှရှိအသင်းတော် ခုနစ်ခုကတစ်ဆင့် ရှင်းပြခဲ့သည်၊ (ဗျာဒိတ်သတင်းသည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် “ဧဝံဂေလိတရားနေ့” ဇာတ်လမ်းကို ခုနစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ပြောပြသည်။. ဧဝံဂေလိတရားနေ့ပုံပြင်တိုင်းသည် ယေရှုခရစ်နှင့် ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော်အား အောင်ပွဲခံကြောင်းပြသခြင်း အမြဲအဆုံးသတ်ပါသည်။ အာရှတိုက်ရှိ အသင်းတော် ခုနစ်ခုသည် ပထမတစ်ခုဖြစ်သည်။)
သင့်သရဖူကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ သွန်းခဲ့သေးသလော။ ခရစ်တော်သည် ယခု သင်၏ဘုရင်ဖြစ်လာစေရန် သင့်စိတ်နှလုံးထဲရှိ ပုန်ကန်မှုနှင့် အပြစ်များကို အောင်နိုင်ပြီလော။ သင့်ဘဝနဲ့ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက် အခွင့်အာဏာအားလုံးကို ဘုရားသခင်ရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုအပေါ် အပြည့်အဝ ပေးထားသလား။
မှတ်ချက်- ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာအပြည့်အစုံတွင် ဆယ့်ကိုးခုမြောက်အခန်းသည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို ဖော်ပြသည်။ အခန်းကြီး ၁၉ ပါ တရားစီရင်ချက်သတင်းစကားများသည် လျှို့ဝှက်ခြင်း၏လွှမ်းမိုးမှုကို ဖျက်ဆီးရန် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေသည့် အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ မြင့်မားသောအဆင့်အမြင်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန်၊ ““လမ်းပြမြေပုံဗျာ”
အမျိုးအစားများ သစ္စာနှင့်သစ္စာ, ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်, ကယ်တင်ခြင်းတန်ခိုး, ဗျာဒိတ်ကျမ်း _၁၉ တဂ် တိုက်ပွဲ, သရဖူ, တရားစီရင်ခြင်း။ ပို့စ်ညွှန်း
ဘုရင်နှင့် အရှင်သခင်သည် သူ၏စစ်တပ်နှင့်အတူ အောင်နိုင်ခဲ့သည်။
လူမဟုတ်၊ ကောင်းကင်တမန်များကို မကိုးကွယ်ပါနှင့်။